၇-ဆယ့်တစ် - ဝီကီပီးဒီးယား
ဂျိုးဇက် တယ်ပင်တို(အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် နှင့် ဥက္ကဋ္ဌ)
စတန်လေ(ဒု ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် ဘဏ္ဍာရေးအရာရှိချုပ်)
အခြားထုတ်ကုန်မျာ: ကော်ဖီ၊၊သကြားလုံး ၊အသင့်စားအစားအစာ၊ဓာတ်ဆီ၊နို့ထွက်ပစ္စည်း၊သွားရည်စား၊အရက်ယမကာ
ဆဲဗင်း အလဲဗင်း (7ᴇʟᴇᴠᴇn) သည်ဒါးလတ်စ်မြို့ ၊ တက္ကဆပ်ပြည်နယ် တွင် အခြေစိုက်သည့် ကုန်စုံစတိုးဆိုင်ကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၁၉၂၇ ခုနှစ်တွင် Dallas ရှိရေခဲအိမ်စတိုးတစ်ခုအဖြစ်စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၁၉၂၈ ခုနှစ်မှ ၁၉၄၆ ခုနှစ်အတွင်း Tote'm Stores ဟုအမည်ပေးခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ ၇၀% ကိုဂျပန်လက်အောက်ခံ Ito-Yokado မှ ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင်ဝယ်ယူပြီးနောက် ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် Seven-Eleven Japan Co. , Ltd ၏လက်အောက်ခံအဖြစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ယခုအခါတိုကျိုအခြေစိုက် Seven & I Holdings Co. , Chiyoda မှပိုင်ဆိုင်သည်။
ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက်နေ့အထိ နိုင်ငံပေါင်း ၇ နိုင်ငံမှ ဆိုင်ခွဲပေါင်း ၇၁,၁၁၁ အထိ ရှိလာသည်။ 
၄.၁.၁၄ ယခင်တည်နေရာ တူရကီ
၄.၂.၄ ယခင်နေရာများ စပိန်နှင့်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း
ဖောက်သည်များက ၎င်းတို့၏ဝယ်ယူမှုများအား စုဆောင်းမိသောကြောင့်ကုမ္ပဏီ၏ပထမဆုံးဆိုင်များမှာTote'm Stores အမည်ရှိ Dallas ဖြစ်သည်။ အချို့သောစတိုးဆိုင်များတွင် စတိုးဆိုင်ရှေ့တွင် စစ်မှန်သောအလက်စကာမှ စုစုပေါင်းစတိုးဆိုင်များပါရှိသည်။ ၁၉၄၆ တွင်ကွင်းဆက်၏အမည်ကို Tote'm မှ 7-Eleven ဟု ပြောင်းလဲ၍ ကုမ္ပဏီ၏အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဖြစ်စေရန် တစ်ပတ်လျှင်ခုနစ်ရက် နံနက် ၇:၀၀ နာရီမှ ၁၁:၀၀ နာရီအဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ၁၉၉၉ နိုဝင်ဘာလတွင်အမေရိကန်ကုမ္ပဏီရဲ့ကုမ္ပဏီအမည်ကို "Southland Corporation" မှ "7-Eleven Inc. " သို့ပြောင်းခဲ့သည်။"
၁၉၂၇ ခုနှစ်တွင် Southland Ice ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်း ဂျွန်ဂျက်ဖာဆန်ဂရင်းသည် ရေခဲများကို စတင်ရောင်းခဲ့သည်။ ထို့နောက်သူသည် Dallas ရှိရေခဲအိမ်စတိုးဆိုင် ၁၆ ခုအနက်တစ်ခုမှ ကြက်ဥ၊ နို့နှင့်ပေါင်မုန့်များကို စတင်ရောင်းချခဲ့သည်။ Thompson, Sr. ကုန်စုံစတိုးဆိုင်ငယ်များနှင့်အထွေထွေကုန်သည်များရှိသော်လည်း Thompsonက အဆင်ပြေသောစတိုးဆိုင်များတွင် ပေါင်မုန့်နှင့်နို့ထွက်ပစ္စည်းများကို ရောင်းချခြင်းသည် ဖောက်သည်များအနေဖြင့် အခြေခံပစ္စည်းများအတွက်ခရီးဝေးသွားရန်လိုအပ်ချက်ကိုလျှော့ချလိမ့်မည်ဟုဆိုခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင် Thompson သည် ရေခဲကုမ္ပဏီကိုဝယ်ယူခဲ့ပြီး ဒါးလတ်စ်မြို့ရှိနေရာအများအပြားကိုကြီးကြပ်သော ကော်ပိုရေးရှင်း အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
၁၉၂၈ ခုနှစ်တွင် Jenna Lira သည် အလက်စကာမှအမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းအဖြစ် Totem တိုင်ကိုယူဆောင်လာပြီးစတိုးဆိုင်ရှေ့တွင်နေရာချခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုများစွာသောသဘောတူညီချက်ဆွဲဆောင်အဖြစ်ဝင်ရိုးစွန်းကုမ္ပဏီများအတွက်ဈေးကွက်ရှာဖွေရေးကိရိယာတခုအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ မကြာခင်မှာပဲအမှုဆောင်အရာရှိတွေကဆိုင်တိုင်းကိုရှေ့မှာစတိုးဆိုင်တိုင်းရှေ့မှာထည့်ပြီးနောက်ဆုံးမှာသူတို့ရဲ့စတိုးဆိုင်တွေအတွက် Alaska Native သွင်းထားတဲ့ဆောင်ပုဒ်ကိုလက်ခံလိုက်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်စတိုးဆိုင်များကို Tote'm Stores ဟူသောအမည်ဖြင့်စတင်လည်ပတ်ခဲ့သည်။ ထိုနှစ်တွင်ပင်ကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏ Dallas ရှိအချို့နေရာများတွင်ဓာတ်ဆီဆိုင်များကိုစမ်းသပ်မှုတစ်ခုအဖြစ်စတင်ခဲ့သည်။ ဂျိုးထောစန်ကလည်းကုမ္ပဏီ၏စတိုးဆိုင်များတွင်ထူးခြားသောလက္ခဏာတစ်ခုပေးပြီးလူတိုင်းသည်စတိုးဆိုင်တိုင်းတွင်တူညီသောအရည်အသွေးနှင့်ဝန်ဆောင်မှုရရှိရန်ဝန်ထမ်းများကိုလေ့ကျင့်ပေးသည်။ တောင်ဘက်ကရေခဲစခန်းရှိယောက်ျားလေးများအတွက်ယူနီဖောင်းလည်းစတင်ခဲ့သည်။ ဒါကလက်လီစတိုးဆိုင်အဖြစ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်အဓိကအချက်တစ်ချက်ဖြစ်လာသည်။[ကိုးကားချက်လိုသည်]
၁၉၃၁ ခုနှစ်တွင်ကမ္ဘာ့စီးပွားပျက်ကပ်ကြီးကကုမ္ပဏီကိုထိခိုက်ခဲ့ပြီးဒေဝါလီခံခြင်းဆီသို့ပို့ခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူကုမ္ပဏီသည်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်လက်ခံခြင်းများမှတဆင့်၎င်း၏လုပ်ငန်းများကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ တစ်ဦးကရှိ Dallas ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်,W.W.Overton Jr. သည်ကုမ္ပဏီ၏ငွေချေးစာချုပ်အားဒေါ်လာ ၇ ဒေါ်လာဖြင့်ရောင်းချခြင်းအားဖြင့်ဘဏ္ဍာရေးကိုပြန်လည်ရှင်သန်စေခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ပိုင်ဆိုင်မှုကိုဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်သို့ရောက်စေသည်။
၁၉၄၆ တွင်ကုမ္ပဏီ၏စစ်အပြီးပြန်လည်နာလန်ထူရန်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းမှုအနေဖြင့်ထိုစဉ်ကမကြုံစဖူးသောစတိုးဆိုင်များ၏နာရီသစ်လည်ပတ်မှု (နံနက် ၇ နာရီမှည ၁၁ နာရီအထိ) ကိုရောင်ပြန်ဟပ်ရန်အတွက် 7-Eleven ဟုအမည်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ၁၉၆၃ ခုနှစ်တွင် Austin စတိုးသည်ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်ညလုံးပေါက်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးနောက် ၇၁ Eleven သည်တက္ကဆက်ပြည်နယ်၊ အော်စတင်တွင် ၂၄ နာရီအစီအစဉ်ဖြင့်စမ်းသပ်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ၂၄ နာရီစတိုးဆိုင်များကို Fort Worth နှင့် Texas ရှိ Dallas ရှိ လပ်ဗီးဂပ်စ်မြို့လပ်ဗီးဂပ်စ်မြို့ နှင့် နီဗားဒါးပြည်နယ် နီဗားဒါးပြည်နယ်တို့တွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၁၉၇၁ ခုနှစ်တွင်တောင်ဘက်က[[လင့်ခ်သေ]] လူဝီစီယားနားပြည်နယ်ရှိShreveport မှ ဂရေဟမ် Allen Penniman, Sr. (1903-1985) ပိုင်ဟောင်းပါကစ္စတန်ကွင်းဆက်၏စတိုးဆိုင်များကိုဝယ်ယူခဲ့သည်။
၁၉၈၇၊ ဩဂုတ်လတွင် Floridian 7-Eleven စတိုးဆိုင်တွင်ဗီဒီယိုဖိုင်
၁၉၆၄ ခုနှစ်တွင်ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိအမြန်ဖွင့်လှစ်သည့်စတိုးဆိုင် ၁၂၆ အမြန်ဖွင့်လှစ်ထားသည့် Speedee Mart ကို ၁၉၆၄ ခုနှစ်တွင်ဝယ်ယူခဲ့ပြီးနောက်ကုမ္ပဏီသည်လုပ်ငန်းလုပ်ငန်းစတင်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီသည် ၁၉၆၈ ခုနှစ်တွင်ပထမဆုံးသောဧရိယာလိုင်စင်သဘောတူညီချက်ကိုမစ်ရှီဂန်ပြည်နယ်၊ Saginawရှိဝတ်ကို၊Saginaw, [[လင့်ခ်သေ]]မီချီဂန်ပြည်နယ်၏ပထမဦးဆုံးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဧရိယာ 7-Eleven လိုင်စင်ရသူဖြစ်လာခဲ့သည်။
၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များနှောင်းပိုင်းတွင်တောင်ဘက်ကော်ပိုရေးရှင်းသည်ကောလာဟလထွက်ပေါ်လာသည့်ကောလာဟလသတင်းများကြောင့် Thompson မိသားစုအားအများပိုင်ရှယ်ယာများကိုတင်ဒါကမ်းလှမ်းမှုဖြင့်ဝယ်ယူခြင်းအားဖြင့်ကုမ္ပဏီကိုပုဂ္ဂလိကပုံစံအဖြစ်ပြောင်းလဲရန်ခြေလှမ်းများလှမ်းခဲ့သည်။၁၉၈၇ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလတွင် 7-Eleven ၏ဥက္ကဋ္ဌနှင့်စီအီးအို John Philp Thompsonကကုမ္ပဏီ၏ဒေါ်လာ ၅.၂ ဘီလီယံစီမံခန့်ခွဲမှုဝယ်ယူမှုပြီးဆုံးခဲ့သည်။ ဝယ်ယူမှုသည် ၁၉၈၇ စတော့ဈေးကွက်ပြိုလဲခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်အစပိုင်းတွင်အထွက်နှုန်းမြင့်မားသောကြွေးမြီဘဏ္ဍာရေးကိုမြှင့်တင်ရန်ပျက်ကွက်ခဲ့ပြီးနောက်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ကုမ္ပဏီ၏ငွေချေးစာချုပ်များတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်လှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်စတော့ရှယ်ယာအချို့ကိုကမ်းလှမ်းရန်လိုအပ်ခဲ့သည်။
ထိုကဲ့သို့သောချုပ်အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများကွင်းဆက်အဖြစ်ပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးမျိုး၊ ရေခဲခွဲခြင်း၊နှင့်စတိုးဆိုင်နေရာများရာပေါင်းများစွာ၊ အရောင်းအဝယ်ကာလအတွင်းကြွေးမြီသက်သာစေရန်၁၉၈၇နှင့်၁၉၉၀အကြားရောင်းခဲ့သည်။ ဤသို့လျှော့ချခြင်းကြောင့်မြို့ပြဧရိယာများစွာသည် ၇-ဆယ့်တစ်စတိုးဆိုင်များကိုပြိုင်ဘက်စတိုးဆိုင်အော်ပရေတာများဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ၁၉၉၀ အောက်တိုဘာလတွင်အကြီးမားဆုံးသောကြွေးတင်နေသည့်တောင်ဘက်ကော်ပိုရေးရှင်းသည်ကုမ္ပဏီ၏ ၇၀% ကိုဂျပန်လက်အောက်ခံ Ito-Yokado သို့လွှဲပြောင်းရန်အတွက်အခန်း ၁၁ ကိုဒေဝါလီခံရန်တင်သွင်းခဲ့သည်။
Ito-Yokado နှင့် Seven-Eleven Japan မှဒေါ်လာ ၄၃၀ မီလီယံဖိုးငွေအပြီးတွင် ၁၉၉၁ ခုနှစ်မတ်လတွင်တောင်ဘက်သည်ဒေဝါလီခံရခြင်းမှလွတ်မြောက်ခဲ့သည်။ ယခုဂျပန်ကုမ္ပဏီနှစ်ခုသည်ကုမ္ပဏီ၏ ၇၀% ကိုထိန်းချုပ်ထားပြီး Thompson မိသားစုကို ၅ ရာခိုင်နှုန်းဆက်လက်ထားရှိသည်။ ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင်တောင်ဘက် ကော်ပိုရေးရှင်းသည် 7-Eleven မှလွဲ၍ အခြားလုပ်ဆောင်မှုများမှခွဲထုတ်ခြင်းအားဖြင့် 7-Eleven, Inc. သို့ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ Ito-Yokado သည် Seven & I Holdings Co. , ကိုတည်ထောင်ခဲ့ပြီး 7-Eleven သည် ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင်၎င်း၏လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် Seven & I Holdings သည်အမေရိကန်လုပ်ငန်းများကိုတိုးချဲ့မည်ဟုကြေညာခဲ့သည်။ နောက်ထပ် ၇၀၀၀ ထပ်တိုးသောအမေရိကန်စတိုးဆိုင်များ။
၂၀၁၀ ခုနှစ်အတွက် 7-Eleven သည် "ကမ္ဘာပေါ်တွင်ပထမဆုံးနှင့်အပြည့်စုံဆုံးအဆင့်" ဖြစ်သည့် Entrepreneur မဂ္ဂဇင်း၏ ၃၁ ကြိမ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်လုပ်ငန်း ၅၀၀ တွင်နံပါတ် ၃ နေရာကိုရောက်ရှိခဲ့သည်။ ၇ နှစ် Eleven ကို ၁၇ နှစ်မြောက်ထိပ်ဆုံး ၁၀ ယောက်စာရင်းဝင်ခဲ့သည်။
၂၀၁၀ တွင်ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်၊ DeLand တွင်ပထမဆုံး "အစိမ်းရောင်" 7-Eleven စတိုးဆိုင်ကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ စတိုးဆိုင်မှာယူအက်စ်အစိမ်းရောင်ဆောက်လုပ်ရေးကောင်စီ (USGBC) ၏စွမ်းအင်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဒီဇိုင်းခေါင်းဆောင်မှု (LEED) ။ ထို့အပြင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောဒီဇိုင်းသည်စတိုးဆိုင်အတွက်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုသက်သာစေသည်။ ထိုနှစ်တွင်ပင် 7-Eleven သည် Slurpee တည်ဆောက်သူ၏အိုင်ဖုန်းနှင့်အန်းဒရွိုက်ဆော့ဝဲ (App) ကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ Slurpee တည်ဆောက်မှုဆော့ဝဲသည် 7-Eleven စတိုးဆိုင်များကိုလွယ်ကူစွာရှာဖွေနိုင်ပြီးမောင်းနှင်မှုလမ်းညွှန်ကိုပေးသည်။ နောက်နှစ်တွင် 7-Eleven သည် ၄၀,၀၀၀ စတိုးဆိုင်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပပြီးနှစ်နှစ်အတွင်းတွင်၎င်း၏စတိုးဆိုင် ၆၀,၀၀၀ ကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ7-Eleven Slurpee အချိုရည်၁၉၆၅မှာစတင်မိတ်ဆက်တစ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအေးစက်နေတဲ့အချိုရည်ဥက္ကလာဟိုးမားရဲ့စတိုးဆိုင်ရေခဲနေသောသောက်အဖြစ်လူသိများကြသည်နှင့် Big Gulp အဖျော်ယမကာ၁၉၇၆ခုနှစ်တွင်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။အခြားထုတ်ကုန်များမှာ ၇-ဆယ့်တစ်ရွေးချယ်ထားသောပုဂ္ဂလိကအမှတ်တံဆိပ်ထုတ်ကုန်များ၊ ကော်ဖီ၊ အသစ်ပြုလုပ်ထားသောနေ့စဉ်အသားညှပ်ပေါင်မုန့်သစ်သီးသစ်များ၊ အသုပ်များ၊ ကိတ်မုန့်များ၊ အပူနှင့်ပြင်ဆင်ထားသည့်အစားအစာများ၊ ဓာတ်ဆီ၊ နို့ထွက်ပစ္စည်းများ၊ ထုတ်ကုန်ပေးပို့န်ဆောင်မှု။
7-Eleven သည်သောက်သုံးမှုပမာဏနှင့် ၂၄ နာရီအသုံးပြုနိုင်မှုအတွက်လူသိများသည်။ 7-Eleven သည် ၁၂၈ အောင်စ (3785 mL) (Team Gulp) အရွယ်အစားရှိသောအဖျော်ယမကာများကိုထုတ်လုပ်သည်။ ဤအဖျော်ယမကာအရွယ်အစားများအားလုံးကိုမိတ်ဆက်စဉ်ကရောင်းချခဲ့သောအချိုရည်များအနက်အများဆုံးဖြစ်သည်။ 7-Eleven သည်လူကြိုက်များသောယဉ်ကျေးမှု၌ဆိုဒါကြီးများနှင့်မကြာခဏဆက်စပ်မှုရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ မြို့တော်ဝန်မိုက်ကယ်ဘလွန်းဘာ့ဂ်၏နယူးယောက်မြို့ရှိဆိုဒါကြီးများကိုပိတ်ပင်ခြင်းကို Big Gulp တားမြစ်ခြင်းဟုမကြာခဏရည်ညွှန်းလေ့ရှိသည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ 7-Eleven က Double Gulp ရဲ့အရွယ်ကို ၆၄ အောင်စကနေ ၅ အောင်စ (၁၄၇၈ mL) ကိုပြောင်းခဲ့တယ်။ အဟောင်းပုံစံခွက်များသည်အောက်ခြေတွင်ကျယ်လွန်း။ ကားများ၌အဖျော်ယမကာကိုင်ဆောင်သူများနှင့်မကိုက်ညီပါ။ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတစ်ဦး၏ပြောကြားချက်အရဆိုဒါတားမြစ်မှုဆိုဒါကြီးကိုတုံ့ပြန်မှုမဟုတ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ၂၀၂၀၊ ဖေဖော်ဝါရီလတွင်သူတို့သည်တက္ကဆက်ပြည်နယ်၊ Irving ရှိ ၇-ဆယ့်တစ်ရုံးချုပ်တွင်ငွေသားမရှိသည့်နေရာကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
7-Eleven in Shek Tong Tsui, ဟောင်ကောင်
7-Eleven ကို ၁၉၈၁ တွင်ဗြိတိသျှကိုလိုနီဖြစ်ခဲ့သောဟောင်ကောင်တွင်ပထမဆုံးဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်ဇူလိုင်လတွင်နို့ထွက်လယ်ယာ၏လက်အောက်ခံအဖြစ်လုပ်ကိုင်သည်။ လူသိများသော tsat jai 七仔, "ချီစေ ခုနစ်" ဟုအဓိပ္ပာယ်ရသောသို့မဟုတ် 些粉ရှင်ဖန် "ခုနှစ်ခု" ပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် 7-Eleven သည်ဟောင်ကောင်တွင်စတိုးဆိုင် ၉၆၄ ခုရှိခဲ့ပြီး ၅၆၃ ခုကို franchisees မှလုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ဟောင်ကောင်သည်မကာအိုပြီးလျှင် ၇-ဆယ့်တစ်စတိုးဆိုင်၏ဒုတိယအများဆုံးအထူဖြစ်သည်။ 7-Eleven စတိုးဆိုင်များအားလုံးသည်နေရာအနှံ့တွင်ရှိသော အောက်တိုပါစ်ကဒ်ကိုငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းအဖြစ်လက်ခံသည်။ သူတို့သည်အိမ်ရာငှားရမ်းခနှင့်အများသုံးအိမ်ရာငှားရမ်းခအတွက်ပေးချေမှုများကိုလည်းလက်ခံကြသည်။
၁၉၈၀ ပြည့်နှစ်၊ နိုဝင်ဘာလတွင်တောင်ဘက်ကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်ဟောင်ကောင်လုပ်ငန်းစု Jardine Matheson တို့သည် ၇-ဆယ့်တစ်ကိုပိုင်နက်သို့သယ်ဆောင်ရန်လုပ်ငန်းသဘောတူစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ပထမဆုံးသော 7-Eleven ဆိုင်သည်မင်္ဂလာချိုင့်တွင် ၁၉၈၁၊ ဧပြီ ၃ ရက်တွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတစ်လျှောက်လုံးတွင်သံကြိုးသည်ဟောင်ကောင်အနှံ့အပြားတိုးများလာခဲ့သည်။ ဆိုင်ခွဲ ၅၀ ကို ၁၉၈၃ ခုနှစ်အောက်တိုဘာ ၆ ရက်တွင် Kwai Chung တွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်မေလ ၇ ရက်၊ Tai Po Center တွင်ဆိုင်မွန်ကိုကိစ်ဝစ်ကဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ဆိုင်များကို Jardine Matheson အုပ်စု၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သော Dairy Farm သို့ ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင်ရောင်းချခဲ့သည်။|page=49}}</ref>
Octopus card reader ကို ၁၉၉၉ ခုနှစ်ဇူလိုင်လတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည့် 7-Eleven စတိုးဆိုင်များတွင်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်၊ သို့သော်အစတွင်၎င်းတို့ကိုကဒ်တန်ဖိုးကိုသာတိုးမြှင့်နိုင်သည်။ ၂၀၀၄ စက်တင်ဘာလတွင်နို့ထွက်လယ်ယာသည် SCMP လက်လီရောင်းချမှု (HK) မှ Daily Stop - ပြိုင်ဘက်စတိုးဆိုင်ကွင်းဆက်ကိုဝယ်ယူသောအခါဟောင်ကောင်ရှိနေရာအရေအတွက်ကိုသိသိသာသာတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ အဓိကအားဖြင့် MTR နှင့် Kowloon-Canton မီးရထားဘူတာ (အဓိကအားဖြင့်ဈေးဝယ်စင်တာများနှင့်အိမ်ယာခြံများ) တွင်တည်ရှိပြီးဆိုင် ၈၄ ဆိုင်ကို ၇-ဆယ့်တစ်စတိုးဆိုင်များသို့ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် Quarry Bay တွင် 7-Eleven တည်ရှိရာနေရာဖြစ်သောရိုးရာဟောင်ကောင်လမ်းအစားအစာနှင့်နို့လက်ဖက်ရည်ရောင်းသော "7 Café" ဟုခေါ်သောပူပြင်းသည့်အစားအစာကောင်တာတစ်ခုဖြင့်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ဤအင်္ဂါရပ်ကို“ Daily Café” နှင့်“ Hot Shot” တံဆိပ်များအောက်ရှိဟောင်ကောင်တစ်လွှားရှိအခြား ၇ နေရာမှ ၁၁ နေရာကိုရွေးရန်တိုးချဲ့ခဲ့သည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် 7-Eleven သည်အင်ဒိုနီးရှား၌စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုတိုးချဲ့ရန်အစီအစဉ်များကို Modern Sevel Indonesia နှင့် Media Nusantara Citra တို့မှမဟာအခွင့်အရေးသဘောတူညီချက်ဖြင့်ကြေညာခဲ့သည်။ Modern Sevel Indonesia ၏ကနဦးအစီအစဉ်များသည်လူဦးရေသိပ်သည်းသောစီးပွားဖြစ်နှင့်စီးပွားရေးနယ်ပယ်များသို့ဂျကာတာတွင်စတိုးဆိုင်များဖွင့်လှစ်ရန်အာရုံစူးစိုက်ရန်ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်အင်ဒိုနီးရှား၌ ၇-ဆယ့်တစ်ဆိုင်ပေါင်း ၁၉၀ ရှိပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်စက်တင်ဘာလအထိဆိုင် ၁၆၆ ခုသာလျှော့ချခဲ့သည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဧပြီလတွင် PT Modern Seven Indonesia သည်ထိုင်းနိုင်ငံရှိ Charoen Pokphand Group ၏လက်အောက်ခံ PT Charoen Pokphand Restu Indonesia မှဝယ်ယူမည်ဖြစ်ကြောင်းကြေညာခဲ့သည်။ အဆိုပါဝယ်ယူဖြစ်စဉ်ကိုဇွန်လ ၂၀၁၇မတိုင်မီပြီးစီးရန်စီစဉ်ထားသည်။Charoen Pokphand Group သည်ထိုင်းနိုင်ငံရှိခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၉၀၀၀၀ ၇-ဆယ့်တစ်စတိုးဆိုင်များတွင်အဓိကလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူဖြစ်သည်။ သို့သော် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၂ ရက်တွင် PT Modern International Tbk ကအင်ဒိုနီးရှားရှိကျန်ရှိနေသေးသော ၇-ဆယ့်တစ် ဆိုင် ၃၀ ကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၃၀ ရက်နေ့တွင်၎င်း၏ဝယ်ယူခြင်းအစီအစဉ်ဖျက်သိမ်းခြင်းကြောင့်ပိတ်သိမ်းလိမ့်မည်ဟုကြေညာခဲ့သည်။
ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့ကိုတိုကျို၌ပထမဆုံးဖွင့်လှစ်ထားသော 7-Eleven ဆိုင်သည် ၁၉၇၄ ခုနှစ်မေလတွင်ဖွင့်လှစ်လိုက်သည်
ဂျပန်သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအခြားနေရာများထက် ၇-ဆယ့်တစ် နေရာပိုများသည်။ ၎င်းတို့တွင်၎င်း၏ Seven & I Holdings အမည်ဖြင့်မကြာခဏကျင်းပလေ့ရှိသည်။ Of the 67,480 stores around the globe, 20,700 stores (nearly 31% of global stores) are in Japan, with 2,705 stores in Tokyo alone. ကမ္ဘာအဝှမ်းရှိစတိုးဆိုင် ၆၇,၄၈၀ တွင်စတိုးဆိုင်ပေါင်း ၂၀,၇၀၀ (ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစတိုးဆိုင်များ၏ ၃၁ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါး) သည်ဂျပန်နိုင်ငံတွင်ရှိပြီးတိုကျိုတစ်ခုတည်းတွင်စတိုးဆိုင် ၂,၇၀၅ ခုရှိသည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်စက်တင်ဘာ ၁ ရက်နေ့တွင် Seven & I Holdings Co. , Ltd. , သည်ကုမ္ပဏီအသစ်ဖြစ်သည့် 7-Eleven, Ito-Yokado နှင့် Denny's Japan တို့၏မိခင်ကုမ္ပဏီဖြစ်လာသည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင် ၇-ဆယ့်တစ်သည်ဂျပန်နိုင်ငံ၏စီရင်စု ၄၇ ခုလုံးတွင် Okinawa စီရင်စုတွင်တည်နေရာအသစ် ၁၄ ခုဖွင့်လှစ်ထားပြီးစတိုးဆိုင်များရှိသည်။
စတိုးဆိုင်၏ဗေဒသည်အခြားနိုင်ငံများမှ ၇-ဆယ့်တစ်စတိုးဆိုင်များနှင့်ကွဲပြားခြားနားသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်စတိုးဆိုင်များသည်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ 7-Eleven စတိုးဆိုင်များသည်အခြားနိုင်ငံများမှခရီးသွားဧည့်သည်များအကြားတွင်ရေပန်းစားသည်။ ဘဏ်ခွဲရှိဘဏ်ခုနစ်ခုသည် ATM စက်များသည်ဂျပန်ယန်းငွေသားထုတ်ယူရန်အတွက်နိုင်ငံခြားငွေထုတ်ယူမှုများနှင့်အကြွေးဝယ်ကတ်များကိုလက်ခံလိမ့်မည်။
ဂျပန်နိုင်ငံရှိအခြားအဆင်ပြေသောစတိုးဆိုင်များဥပမာအနေဖြင့် 7-Eleven သည်ဆိုလာပြားများနှင့် LEDများကို၎င်း၏စတိုးဆိုင် ၁၄၀၀ ခန့်တွင်တပ်ဆင်ထားသည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်ဇူလိုင်လတွင် 7-Eleven သည်မိုဘိုင်းငွေပေးချေမှုဝန်ဆောင်မှုဖြစ်သော 7pay ကိုချက်ချင်းဆိုင်းငံ့ခဲ့သည်။ ဝန်ဆောင်မှုကိုလွှင့်တင်ပြီးနောက်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရသည်။ တိုက်ခိုက်သူများသည်ဖောက်သည်များ၏အကောင့်များမှပိုက်ဆံဖြုန်းနိုင်ခဲ့သည်။
7-Eleven သည် ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင်ဟောင်ကောင်ရှိ ၇-Eleven ကိုလုပ်ကိုင်နေသည့် Dairy Farm ၏ပိုင်ဆိုင်မှုအောက်တွင်မကာအိုဈေးသို့ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ၂၅.၉ စတုရန်းကီလိုမီတာသာရှိသောကြောင့်မကာအိုတွင်စတိုးဆိုင် ၄၅ ခုရှိပြီး ၇-Eleven စတိုးဆိုင်အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည့်တစ်ခုတည်းသောဈေးကိုဝယ်သည်။ ၀.၆၅ စတုရန်းကီလိုမီတာတွင်စတိုးဆိုင်တစ်ခုရှိသည်။
၇-ဆယ့်တစ်သည် ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင်တရုတ်နိုင်ငံ၊ Shenzhen ရှိ Guangdong တွင်စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင်ပေကျင်းသို့လည်းကောင်း၊ ၂၀၀၉ တွင် Tianjin နှင့်ရှန်ဟိုင်း၊ ၂၀၁၁ တွင် Chengdu၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် Qingdao၊ ၂၀၁၃ တွင် Chongqing၊ နှင့် Wuhan, Xi'an နှင့် Fuzhou တို့ကို ၁၉၉၉ တွင်စတင်ခဲ့သည်။ Slurpees ကိုဝယ်ယူသော 7-Eleven စတိုးဆိုင်များတွင်တရုတ်နာမည်思乐冰 (စေ့လေပင်) ကိုအသုံးပြုသည်။ သူတို့သည်ရိုးရာပစ္စည်းများအပါအဝင်ရိုးရာပစ္စည်းများအပါအဝင်နွေးထွေးသောအစားအစာများစွာကိုလည်းကမ်းလှမ်းသည်။ Chengdu မှစတိုးဆိုင်များသည် onigiri အမျိုးမျိုး (饭团) အမျိုးမျိုးကိုပေးသည်။ အချိုရည်များ၊ အရက်၊ သကြားလုံးများ၊ စာနယ်ဇင်းများနှင့်အခြားအဆင်ပြေသည့်ပစ္စည်းများလည်းရရှိနိုင်သည်။ ဤစတိုးဆိုင်အများစုကိုတစ်နေ့လျှင် ၂၄ နာရီဖွင့်နိုင်သည်။
မလေးရှား၊ ကွာလာလမ်ပူရှိ ၇-ဆယ့်တစ်ဆိုင်တစ်ဆိုင်
မလေးရှားနိုင်ငံမှ 7-Eleven စတိုးဆိုင်များကို 7-Eleven Malaysia Sdn ကပိုင်ဆိုင်သည်။ တစ်နိုင်ငံလုံးစတိုးဆိုင်ပေါင်း ၂၂၂၂ ခုဖွင့်လှစ်ထားသော7-Eleven ကိုမလေးရှားနိုင်ငံတွင် ၁၉၈၄၊ ဇွန် ၄ ရက်တွင် Berjaya Group Berhad မှဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ပထမ ဦး ဆုံး 7-Eleven စတိုးကို ၁၉၈၄၊ အောက်တိုဘာလတွင်ကွာလာလမ်ပူ၊ Jalan Bukit Bintang တွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
ဖိလစ်ပိုင်တွင် ၇-Eleven ကိုဖိလစ်ပိုင်ခုနစ်ကော်ပိုရေးရှင်း (PSC) ကစီမံသည်။ ပထမဆုံးစတိုးဆိုင်ကို Quezon City တွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ၁၉၈၄ ခုနှစ်တွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင်ထိုင်ဝမ်သမ္မတ Chain Store Corporation (PCSC) သည် ၇-Eleven ၏လိုင်စင်ရသူဖြစ်ပြီး PSC ၏အစုရှယ်ယာအများစုကိုဝယ်ယူခဲ့ပြီးစတိုးဆိုင်အတွက်မဟာဗျူဟာမြောက်မဟာမိတ်ဖွဲ့ခဲ့သည်။ ဧရိယာအတွင်းစက်မှုလုပ်ငန်း၂၀၁၅ ခုနှစ်အကုန်တွင်စတိုးဆိုင်အရေအတွက် ၁,၆၀၂ ခုသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ၂၀၁၇ တွင်ဖိလစ်ပိုင်တစ်ဝှမ်းလုံးရှိ ၇၁ Eleven ဆိုင်ပေါင်း ၂,၂၈၅ ခုရှိသည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်အောက်တိုဘာ လမှစ၍ ၇-ဆယ့်တစ်သည် Caltex နှင့်သဘောတူညီချက်တစ်ခုကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီးတစ်နိုင်ငံလုံးရှိဓာတ်ဆီဆိုင်များတွင်အဆင်ပြေချောမွေ့စွာအရောင်းဆိုင်များဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့သည်။
စင်္ကာပူတွင် 7-Eleven သည်ကျွန်းတစ်ခွင်လုံးတွင်အဆင်ပြေဆုံးစတိုးဆိုင်ကြီးများကိုဖွဲ့စည်းသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအထိတစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်ဖြန့်ကျက်ထားသည့် 7-Eleven ဆိုင်ပေါင်း ၃၉၃ ခုရှိသည်။ စင်ကာပူရှိစတိုးဆိုင်များသည် 7-Eleven Incorporated နှင့်လိုင်စင်သဘောတူညီချက်အရအခွင့်အလမ်းပြုထားသော Dairy Farm International Holdings မှလည်ပတ်သည်။ ၁၉၈၃ ခုနှစ်တွင် Upper Changi လမ်းမကြီးတလျှောက်တွင်စင်္ကာပူ၌ပထမဆုံးဖွင့်လှစ်ထားသော 7-Eleven စတိုးကို ၁၉၈၆ တွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး၊ ထိုလိုင်စင်ကို ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် Dairy Farm Group ၏လက်အောက်ခံ Cold Storage Singapore မှဝယ်ယူခဲ့သည်။
၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် Shell Singapore နှင့် 7-Eleven တို့သည် Shell Select စတိုးဆိုင် ၆၈ ခုကို ၇-Eleven သို့ပြောင်းရန်သဘောတူခဲ့သည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အောက်တိုဘာလတွင်အစုစပ်လုပ်ငန်းကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီး Shell ဓာတ်ဆီဆိုင်ရှိကျန်ရှိသော ၇၂ ဆယ့်ခုနစ်ဆိုင်ကို Shell Select သို့တဖြည်းဖြည်းပြန်လည်သတ်မှတ်ပေးလိမ့်မည်။
7-Eleven တောင်ကိုရီးယားဆိုးလ်ရှိ Godeokဘူတာတွင်
7-Eleven သည် CU (store), GS25 (ယခင် LG25) နှင့်လွတ်လပ်သောပြိုင်ဘက်များနှင့်ယှဉ်ပြိုင်သည့်ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံစတိုးဆိုင်ဈေးကွက်တွင်အဓိကနေရာတွင်ရှိသည်။ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံတွင်စတိုးဆိုင်ပေါင်း ၉၁၂၃ ခုရှိသည်။ ဂျပန်နှင့်[[လင့်ခ်သေ]]များသာစတိုးဆိုင်များကိုပိုမိုလက်ခံနိုင်သည်။ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံတွင်စတိုးဆိုင်ပေါင်း ၉၁၂၃ ခုရှိသည်။ ဂျပန်နှင့်ထိုင်းနိုင်ငံများသာစတိုးဆိုင်များကိုပိုမိုလက်ခံနိုင်သည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် Lotte Group သည် Buy the Way စတိုးဆိုင်များကိုဝယ်ယူခဲ့ပြီး 7-Eleven အမှတ်တံဆိပ်အောက်ရှိစတိုးဆိုင် ၁၀၀၀ ကိုနာမည်ပြောင်းခဲ့သည်။
7-Eleven ဆိုင်နှစ်ဆိုင်သည်ထိုင်ဝမ်နယူးတိုင်ပေမြို့၊ Xindian ခရိုင်ရှိလမ်းဆုံတစ်ခုတည်းတွင်ရှိသည်
7-Eleven သည်ထိုင်ဝမ်၌အဆင်ပြေလွယ်ကူသောစတိုးဆိုင်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ Uni-President Enterprises ကော်ပိုရေးရှင်းအောက်ရှိ နိုင်ငံတော်သမ္မတChain Store ကိုကော်ပိုရေးရှင်း ၏လက်အောက်တွင်ရှိသည်။ ပထမဆုံးစတိုးဆိုင် ၁၄ ခုကို ၁၉၇၉ ခုနှစ်တွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးအမြတ်ရရန်ရုန်းကန်ခဲ့ရသည်။ စတိုးဆိုင်များကိုခေတ်မီစေရန်တောင်ဘက်ကော်ပိုရေးရှင်းသည် Uni-President နှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ သို့သော်စီးပွားရေးသည်နှေးကွေးနေဆဲဖြစ်ပြီး Uni-President သည်အာရှအစားအစာများသိုလှောင်ရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ၁၉၈၆ ခုနှစ်တွင် ၇-Eleven သည်ထိုင်ဝမ်တွင်ပထမဆုံးအမြတ်ရရှိခဲ့သည်။ စတိုးဆိုင် ၅၀၀၀ ကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်ဇူလိုင်လတွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတွင် X-Store အမှတ်တံဆိပ်ဖြင့်စမ်းသပ်။ မတတ်နိုင်သောဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ 7-Eleven သည်ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် Domino's Pizza နှင့် ပူးပေါင်း၍ ပေါင်းစပ်ထားသောစတိုးဆိုင်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်အစီအစဉ်ရှိကြောင်းကြေညာခဲ့သည်။</ref>
7-Eleven နာရီOpen-Chan ကာတွန်း (ညာ) နှင့်သူ၏သူငယ်ချင်းများ (ဘယ်ဘက်)
အစောပိုင်း၂၀၀၀ခုနှစ်မှာ 7-Eleven စဖွင့်စပါချန်း (小將) အမည်ရှိကော်ပိုရိတ် mascot, စတိုးဆိုင်ကွင်းဆက်တစ်ခု "ကာတွန်းပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ" Planet ကိုပွင့်လင်းအဖြစ်လူသိများနေတဲ့စိတ်ကူးယဉ်ကမ္ဘာဂြိုဟ်ကနေသက်တံ့-ပုံပန်းဦးရစ်သရဖူကိုကျီသူဂြိုဟ်သားခွေးမိတ်ဆက် ထိုင်ဝမ်တွင် Open-Chan သည်ထိုင်ဝမ်ကလေးများအကြားတွင်စတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီးမကြာမီလူကြိုက်များလာသည်။ထိုင်ဝမ်တွင်ထင်ရှားကျော်ကြားသူဖြစ်လာသည့် Open-Chan ၏နောက်ဆက်တွဲဇာတ်ကောင်သည်ဂျပန်တွင်ပင်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
7-Eleven, Sukhumvit Soi 13,ဘန်ကောက်ထိုင်းနိုင်ငံ
ပထမဆုံးထိုင်း 7-Eleven ကို ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင်ဘန်ကောက်ရှိ Patpong လမ်းတွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ထိုကုမ္ပဏီတွင်ကုမ္ပဏီပိုင် (၄၅%) နှင့်လုပ်ငန်းဆိုင်ခွဲများ (၅၅%) တို့ပါဝင်သည်။ CP ALL Public Company Limited သည်ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ၇-Eleven ပိုင်ရှင်နှင့် franchisor ဖြစ်သည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်မတ်လတွင်ထိုင်းနိုင်ငံတွင်စတိုးဆိုင် ၁၁,၇၀၀ ရှိပြီး ၁၇၀,၀၀၀ ခန့်အလုပ်ခန့်ထားသည်။ 2018 ခုနှစ်တွင် 7-Eleven CP များအတွက်ဝင်ငွေဘတ် ၃၃၃၅၃၂သန်းကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ 7-Eleven သည် ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းသောဈေးကွက်ဝေစုကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးအချို့စတိုးဆိုင် ၇၀၀၀ (ဥပမာ FamilyMart) နှင့် "mom and pop" ဆိုင်များကန့်ကွက်သည်။ ထိုင်းဂျပန်ပြီးနောက် 7-Eleven စတိုးဆိုင်၏ဒုတိယအများဆုံးရှိပါတယ်။ ပလတ်စတစ်ညစ်ညမ်းမှုကိုလျှော့ချရန်အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ၇-ဆယ့်တစ်စတိုးဆိုင်များ၏မိခင်ကုမ္ပဏီဖြစ်သော CP All Public Company သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလတွင်တစ်ကြိမ်တည်းအသုံးပြုသောပလပ်စတစ်အိတ်များကိုအသုံးပြုခြင်းကိုလျှော့ချရန်နှင့်သူတို့၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုကြေညာခဲ့သည်။ ၂၀၂၀၊ ဇန်နဝါရီလတွင် ၇-ဆယ့်တစ် နှင့်အခြားထိုင်းလက်လီရောင်းဝယ်သူ ၄၂ ဦးသည်ဖောက်သည်များအားတစ်ကြိမ်သာပလပ်စတစ်အိတ်များပေးခြင်းကိုရပ်ဆိုင်းတော့မည်ဖြစ်သည်။
Seven & I Holdings သည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်နွေရာသီတွင်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၊ ဒူဘိုင်းတွင်ပထမဆုံးအရှေ့အလယ်ပိုင်း ၇-ဆယ့်တစ်ကိုဖွင့်လှစ်ရန်အတွက် Seven Emirates Investment LLC နှင့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုကြောင်း ၂၀၁၄ ခုနှစ်ဇွန်လတွင်ကြေညာခဲ့သည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အကုန်တွင်နိုင်ငံအတွင်းဆိုင်ပေါင်း ၁၀၀ ခန့်ဖွင့်လှစ်ရန်အစီအစဉ်ရှိကြောင်းကုမ္ပဏီကပြောကြားခဲ့သည်။ ပထမဦးဆုံးအစတိုးဆိုင်တိုင်းပြည်ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၈ ၏အဖြစ် 13 စတိုးဆိုင်များရှိပါတယ်အောက်တိုဘာလ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
Seven & I Holdings သည်ပထမ ဦး ဆုံး 7-Eleven ကို Saigon ကုန်သွယ်ရေးစင်တာတွင် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီလအထိဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင်ဟိုချီမင်းတွင်စတိုးဆိုင် ၄၅ ခုရှိသည်။
7-Eleven သည် ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင်တူရကီဈေးကွက်သို့ ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ၁၉၈၉ စက်တင်ဘာ ၁၂ ရက်တွင်၎င်း၏ပထမဆုံးစတိုးဆိုင်ကိုဖွင့်ခဲ့သည်။</ref> မာစတာဂိမ်း၏အဓိကအစုရှယ်ယာရှင်ဖြစ်သောအော်စကာသည်သူ၏ဇနီးတန်ဆန်အီလဲန်းဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာပြီးနောက် ၁၉၉၃ တွင်သူ၏အစုရှယ်ယာများကိုရောင်းချခဲ့သည်။ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်များတွင် ၇-ဆယ့်တစ် သည်တူရကီဈေးကွက်မှထွက်ခွာခဲ့ပြီး၎င်း၏စတိုးဆိုင်အများစုကို franchise ပိုင်ရှင်များထံလွှဲပြောင်းခဲ့သည်။
ပထမဦးဆုံးဥရောပ 7-Eleven စတိုးကို ၁၉၇၈ ခုနှစ်တွင်ဆွီဒင်နိုင်ငံစတော့ဟုမ်းတွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။7-Eleven စတိုးဆိုင်များသည်ယခုအခါစကင်ဒီနေးဗီးယားဒေသရှိဥရောပ၌သာတစ်ခုတည်းသာတည်ရှိသည်။ စကင်ဒီနေးဗီးယားရှိ 7-Eleven အတွက်အဓိကဂိမ်းပိုင်ရှင်မှာ Reitan Servicehandel ဖြစ်ပြီးနော်ဝေးလက်လီကုမ္ပဏီ Reitan Group ၏လက်ရုံးဖြစ်သည်။ Reitangruppen သည် ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင်နော်ဝေနှင့်ဆွီဒင်နိုင်ငံရှိ HydroTexaco (ယခု YX Energy) အလိုအလျှောက်ဘူတာရုံကို ၀ ယ်ယူပြီးနောက်ဓာတ်ဆီဆိုင်ရှိစတိုးဆိုင်အတော်များများကို 7-Elevens အဖြစ်အမှတ်အသားပြုပြီး Shell ကထောက်ပံ့လိမ့်မည်ဟုကြေညာခဲ့သည်။ အခြားစတိုးဆိုင်များမှာ YX တံဆိပ်အောက်တွင်ရှိသည်။
ဒိန်းမတ်အတွက်ပထမဦးဆုံး, 7-Eleven စတိုးဆိုင်ကိုပင်ဟေဂင်ဗဟိုဘူတာမှာရှစ်စတိုးဆိုင်များအပါအဝင်အများစုကိုပင်ဟေဂင်, Aarhus, Aalborg နှင့် Odense အတွက်၁၈၃ စတိုးဆိုင်များ, ရှိပါတယ်စက်တင်ဘာလ 14, 1993 ရက်တွင်ကိုပင်ဟေဂင်အတွက်ကိုပင်ဟေဂင်မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံတွင် 7-Eleven သည် Shell နှင့် 7-Eleven ဝန်ဆောင်မှုဌာနများကွန်ယက်တစ်ခုရှိသည်။ DS-B နှင့်ရထားဘူတာအများစုတွင် ၇-ဆယ့်တစ် ဆိုင်များဖွင့်လှစ်ရန် Shell နှင့်သဘောတူညီမှုရှိသည်။
၁၉၇၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့တွင်နော်ဝေး၌ပထမဆုံးသော ၇-ဆယ့်တစ်ဆိုင်ကိုအော်စလိုမြို့ Grunerlokka တွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတွင်နော်ဝေတွင်စတိုးဆိုင် ၁၅၃ ခုရှိသည့် ၇-၁၁ ခုရှိပြီး၊ အော်စလိုတွင် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိသည်။ Tromsøတွင်တည်ရှိသောနော်ဝေသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အမြောက်ဆုံး ၇ ခုမြောက် Eleven ရှိသည်။ လူတစ်ဦးချင်းစီအရနော်ဝေတွင်ကနေဒါနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၇၄,၁၄ လုံးတွင်နော်ဝေလူမျိုး ၄၇၀၀၀ အတွက်စတိုးဆိုင်တစ်ခုရှိပြီးကနေဒါနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၇၄၀၀၀ တွင်တစ်ဆိုင်ရှိသည်။
၇-ဆယ့်တစ် သည်ဆွီဒင်နိုင်ငံ၊ Lund ရှိ Martenstorget တွင်ဖြစ်သည်
Reitan Group သည် ၁၉၉၇ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ လမှစ၍ ဆွီဒင်တွင်လိုင်စင်ရရှိခဲ့သည်။ ၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအလယ်ပိုင်းတွင်ဆွီဒင်နိုင်ငံမှ ၇-ဆယ့်တစ်သည်ထိုအချိန်ကရရှိထားသောလိုင်စင်ရကုမ္ပဏီဖြစ်သောအမေရိကန်အခြေစိုက်ကုမ္ပဏီငယ်များကကမ်းလှမ်းသောဆိုးရွားသည့်အလုပ်သမားကန်ထရိုက်များကြောင့်လူသိရှင်ကြားကြေညာခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ရောင်းအားနှင့်ပိတ်ပစ်ခံရအများအပြားစတိုးဆိုင်များအတွက်ရလဒ်စတော့ခ်ဟုမ်းနှင့်ဂေါင်ဘာ့ဂ်တွင် ၇ ဆယ့် ၁၁ ယောက်သာရှိသည်။
7-Eleven သည် ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင်ဆွီဒင်၏တောင်ဘက်သို့ Lund တွင်စတိုးဆိုင်ဖွင့်လှစ်သောအခါပြန်လာခဲ့သည်။ ၂၀၀၀ ပြည့်လွန်နှစ်များနှောင်းပိုင်းတွင်ဆွီဒင် 7-Eleven ကွင်းဆက်သည် 7-Eleven franchise ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုတွင် Reitan Group ၏စီမံခန့်ခွဲမှုတွင်ဆွီဒင် TV3သည်လိမ်လည်မှုကိုဖော်ထုတ်သည့်အခါဆွီဒင် 7-Eleven ကွင်းဆက်အငြင်းပွားဖွယ်ရာတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည်ဝဘ်ဆိုက်။
၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၂၇ ရက်နေ့တွင် Reitan Group နှင့် Shell တို့သည်နော်ဝေ၊ ဆွီဒင်၊ ဖင်လန်နှင့်ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ ၇ ခုမှ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောစခန်း ၂၆၉ ခုအားနာမည်ပြောင်းလဲရန်ဆယ်နှစ်သဘောတူညီချက်ကိုကြေညာခဲ့သည်။ စာချုပ်အရ ၇-ဆယ့်တစ် သည်စတိုးဆိုင် ၇၇ ခုမှဆွီဒင်ရှိ ၁၈၉ ဆိုင်အထိတိုးချဲ့မည်ဟုဆိုလိုသည်။ ယခုအခါနိုင်ငံတွင်စတိုးဆိုင် ၁၈၇ ခုရှိသည်။
7-Eleven ကိုစပိန်တွင် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်အထိရရှိနိုင်ခဲ့ပြီးRepsol ဓာတ်ဆီဆိုင်များအတွင်းနှင့်နိုင်ငံအနှံ့ရှိအခြားဓာတ်ဆီဆိုင်အချို့ရှိသည်။
၁၉၈၀ ပြည့်နှစ်များအတွင်းလန်ဒန်နှင့်အင်္ဂလန်၏အရှေ့တောင်ပိုင်းတွင် ၇-ဆယ့်တစ်အဆင်ပြေသောစတိုးဆိုင်များသည်အများအားဖြင့်ရှိခဲ့သည်။ ပထမဆုံးဆိုင်ကို ၁၉၈၅ တွင်လန်ဒန်မြို့၊ ဆစ်ဒန်ဟမ်အရှေ့တောင်လန်ဒန်တွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင်ကုမ္ပဏီသည်ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းများရပ်တန့်ခဲ့သော်လည်း ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်ယူကေကုန်သွယ်မှုပြန်လည်စတင်ရန်စဉ်းစားခဲ့သည်။
ကနေဒါတွင်ပထမဆုံးဖွင့်လှစ်သော 7-Eleven စတိုးသည် ၁၉၆၉၊ ဇွန် ၂၉ ရက်၊ အယ်လ်ဘာတာရှိ Calgary တွင်ရှိသည်။ ၂၀၁၇ တွင်ကနေဒါ၌ ၇၁တစ်ဆိုင် ၆၄၀ ရှိသည်။|lc=y}}. Manitoba တွင် Winnipeg သည်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး Slurpee သုံးစွဲသူများရှိပြီး ၁၉၇၀ မတ်လ ၂၁ ရက်တွင်စတင်ဖွင့်လှစ်သော 7-Eleven ပထမဦးဆုံးစတင်ဖွင့်လှစ်ချိန်မှ စ၍ Slurpees ၁,၅၀၀,၀၀၀ ရောင်းချခဲ့သည်။ ကနေဒါရှိ ၇-ဆယ့်တစ် ခုလုံးကိုကော်ပိုရိတ်ဖြင့်လည်ပတ်သည် ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက်နေ့တိုင်းအမေရိကန်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကဲ့သို့ပင်စတိုးဆိုင်များသည် "7-Eleven Day" တွင် Slurpees များကိုအခမဲ့ပေးသည်။
ကန့်သတ်ထားသောနေရာ ၇ ခုမှ ၁၁ ခုသည် Shell Canada၊ Petro-Canada သို့မဟုတ် Esso မှဓာတ်ဆီဆိုင်များပါရှိသည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလတွင်ကနေဒါရှိ Speak Out ကြိုးမဲ့ဆဲလ်ဖုန်းဝန်ဆောင်မှု 7-Eleven ကိုစတင်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ ၇-၁၁ နေရာတွင် CIBC ATM စက်များလည်းပါဝင်သည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်ဇွန်လတွင်ထိုစက်များကို Scotiabank မှလည်ပတ်သည့် ATM စက်များဖြင့်အစားထိုးခဲ့သည်။ 7-Eleven သည်အွန်တာရီယို၊ အွန်တာရီယိုဈေးကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင်၎င်း၏ဆိုင်ခွဲ ၆ ခုကိုဒေသဆိုင်ရာကွင်းဆက် Quickie Convenience Stores သို့ရောင်းချခဲ့သည်။ Speak Out ကြိုးမဲ့ဖောက်သည်များ၏ကံကြမ္မာနှင့်ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်မှုများရှိလာသောအခါ Quickie သည်ရှိပြီးသား SpeakOut ဖောက်သည်များနှင့်ဖုန်းများကို၎င်း၏ Good2Go ဆဲလ်ဖုန်းပရိုဂရမ်တွင်ထည့်သွင်းရန်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ Alimentation Couche-Tard နှင့် Boni-soir စသည့်ချည်နှောင်မှုများနှင့်လွတ်လပ်သောငွေရေးကြေးရေးများကယင်း၏ပြည့်နှက်နေသောကြောင့် 7-Eleven သည်ကွီဘက်ဈေးကွက်တွင်အလားတူမရှိ။
၂၀၁၆ ခုနှစ်မတ်လတွင် ၇-Eleven သည်အယ်လ်ဘာတာနှင့်ဗြိတိသျှကိုလံဘီယာရှိ Imperial ရေနံပိုင်ဆိုင်သည့် Esso ဓာတ်ဆီဆိုင် ၁၄၈ ခုကိုဒေါ်လာ ၂.၈ ဘီလီယံဖြင့်ဝယ်ယူခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့အဆင်ပြေစတိုးဆိုင်အများစုဟာ 7-Eleven စတိုးဆိုင်များသို့ကူးပြောင်းခဲ့ကြပြီး Esso ကထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။ အချို့သောနေရာများကိုချက်ချင်းပင် 7-Eleven သို့ ပြောင်းလဲ၍ မရပါ။ အစားထိုး On-Run ကွင်းဆက်မှအစဉ်အဆက်အမွေဆက်ခံထားသောစတိုးဆိုင်ပုံစံများနှင့်အတူ smartstop 24/7“ transstanner banner” အောက်တွင်အလုပ်လုပ်သည်။}}</ref>
မက္ကဆီကိုတွင်, 7-Eleven စတိုးဆိုင်ကို ၁၉၇၁ ခုနှစ်တွင် Monterrey တွင် Grupo Chapa (ယခု Iconn) နှင့် 7-Eleven, Inc တို့နှင့် ပူးပေါင်း၍ ဖွင့်သည်။ ၁၉၉၅ တွင် Super7ကို 7-Eleven ဟုအမည်ပြောင်းခဲ့သည်။ နိုင်ငံ၏ဒေသများစွာတွင်စတိုးဆိုင်ပေါင်း ၁၈၃၅ ခုရှိသည်။ စတိုးဆိုင်များသည် Centro Históricoအဆောက်အဦး များ (ဥပမာ Centro Históricoအဆောက်အ ဦး များ) သို့မဟုတ်အရေးကြီးသောအထင်ကရအဆောက်အအုံများအတွင်း၌တည်ရှိပါကစတိုးအသွင်အပြင်အမှတ်အသားကိုရွှေသို့မဟုတ်ငွေဖြင့်အက္ခရာဖြင့် monochrome တွင်ပြသသည်။ မက္ကဆီကိုတွင်အဓိကပြိုင်ဘက်များမှာ OXXO (Femsa), Super City (Soriana) နှင့် Farmacias Guadalajara တို့ဖြစ်သည်။
Pennsylvania ပြည်နယ်၊ Ellwood City ရှိဓာတ်ဆီအရောင်းအဝယ်အတွက် Gulf Oil နှင့် 7-Eleven စတိုးဆိုင် ၇ ခုပါရှိသည်။
Supermarket News သည် ၂၀၀၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ခန့်မှန်းရောင်းအားအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၅.၀ ဘီလီယံကို အခြေခံ၍ ၂၀၀၇ ခုနှစ်“ မြောက်အမေရိကစားနပ်ရိက္ခာလက်လီရောင်းချသူများ၏ ၇၅ ခု” တွင် ၇-Eleven ၏မြောက်အမေရိကလည်ပတ်မှုနံပါတ် ၁၁ နေရာတွင်ရှိသည်။ ၂၀၀၅ ဝင်ငွေအပေါ် အခြေခံ၍ 7-Eleven သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ ၂၄ ခုမြောက်အကြီးမားဆုံးလက်လီအရောင်းဆိုင်ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၃ တွင်ယူအက်စ်တစ်လွှားတွင် ၇,၁၁၁ ခုရှိသည်။ ဂိမ်းခသည်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀ မှ ၁၀၀၀ ကြားအတွင်းရှိမူပိုင်ခွင့်နှုန်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားသည်။ 7-Eleven America သည်တက္ကဆက်ပြည်နယ် Irving ရှိ Cypress Waters ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်၎င်း၏ဌာနချုပ်ရှိသည်။ ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက်၊ ၇ ရက် ၁၁ ရက်နေ့တွင်အရွယ်အစားသေးငယ်သည့် Slurpees များသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ဤအားလပ်ရက်ကို ၂၀၀၈ ခုနှစ်ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက်တွင် J. Brabank နှင့် C. Johnson တို့ကပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ခြွင်းချက်တစ်ခုမှာ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုကြောင့်ထိုနှစ်တွင်ဖျက်သိမ်းခြင်းဖြစ်သည်။ ၇ ဆုချီးမြှင့်သောအသင်းဝင်များသည်ထိုနှစ်ဇူလိုင်လတွင်အသုံးပြုရန်သူတို့၏ app တွင်အခမဲ့အလတ်စား Slurpee ကိုရရှိသည်။
7-Eleven ဥက္ကလာဟိုးမားစတိုးဆိုင်များသည်ဝီလျံဘရောင်းနှင့်သဘောတူညီချက်အရ ၁၉၅၃ ခုနှစ်မှစ၍ လွတ်လပ်စွာလုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ၎င်းကိုသူ၏သားဂျိမ်းစ်ဘရောင်းမှ ဦး ဆောင်နေသည်။ ဤသဘောတူညီချက်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် Oklahoma ရှိ 7-Elevens သည်အခြားနေရာများရှိစတိုးဆိုင်များနှင့်အနည်းငယ်ကွဲပြားမှုရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့် Big Bite ဟော့ခတ်ကဲ့သို့သောထုတ်ကုန်များကိုမရောင်းပါ။ National 7Rewards system နှင့်မချိတ်ဆက်နိုင်သောကိုယ်ပိုင်သစ္စာရှိမှုအစီအစဉ်ကို“ Thx!” ဟုခေါ်သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအထိလက်ရှိတွင်နိုင်ငံအတွင်းစတိုးဆိုင်ပေါင်း ၇,၈၅၄ ခုရှိသည်။
ယူအက်စ်တွင်၊ ၇-၁၁ နေရာအများအပြားတွင် Citgo မှဖြန့်ဝေသောဓာတ်ဆီနှင့်ဓာတ်ဆီဆိုင်များရှိသည်။ ၁၉၈၃ ခုနှစ်တွင်တောင်ဘက်ကော်ပိုရေးရှင်းကဝယ်ယူခဲ့သည်။ Citgo ၏ ၅၀% ကို ၁၉၈၆ ခုနှစ်တွင်Petróleos de Venezuela, SA သို့ရောင်းချခဲ့ပြီးကျန်တဲ့ ၅၀% ကို ၁၉၉၀ မှာဝယ်ယူခဲ့သည်။ Citgo သည် 7-Eleven ၏အဓိကမိတ်ဖက်ဖြစ်သော်လည်းအခြားရေနံကုမ္ပဏီများသည် ၇-Eleven နှင့်အတူပူးတွဲတံဆိပ်ကပ်ထားသည်။ Fina၊ Exxon၊ ပင်လယ်ကွေ့၊ မာရသွန်၊ BP၊ Shell, Chevron (၂၀၁၂ ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင် 7-Eleven မဝယ်ခင် TETCO စတိုးဆိုင်အချို့ကို Chevron နှင့် Texaco တို့ပူးတွဲအမှတ်တံဆိပ်) နှင့် Pennzoil တို့ဖြစ်သည်။ Conoco သည်မြောက်အမေရိကတွင်အကြီးဆုံး ၇ ခုမြောက်သောလိုင်စင်ရသူဖြစ်သည်။}}</ref>
7-Eleven သည် ၂၀၁၀ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလတွင်ဖလော်ရီဒါရှိဆိုဒ် ၁၈၃ ခုဝယ်ယူရန် ExxonMobil နှင့်သဘောတူညီမှုတစ်ခုကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လတွင်မြောက်ပိုင်းတက္ကဆက်တွင် ExxonMobil ဆိုဒ် ၅၁ ခုကိုဝယ်ယူခဲ့သည်။
ဩစတြေးလျနိုင်ငံမဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိ ၇-ဆယ့်တစ် ဆိုင် (၂၀၁၈)
ဩစတြေးလျ၌ပထမဆုံးသော 7-Eleven ကို ၁၉၇၇၊ ဩဂုတ်လ ၂၄ ရက်နေ့တွင် Victoria, Oakleigh ၏ဆင်ခြေဖုံးတွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ စတိုးဆိုင်အများစုသည်မြို့ပြဒေသများ၊ အထူးသဖြင့်စီးပွားရေးအချက်အချာကျသောနေရာများတွင်တည်ရှိသည်။ ဆင်ခြေဖုံးဒေသရှိစတိုးဆိုင်များသည်ဓာတ်ဆီဆိုင်များအဖြစ်မကြာခဏလည်ပတ်လေ့ရှိပြီးအများစုမှာဗဟိုအုပ်ချုပ်မှုစနစ်ဖြင့်ပိုင်ဆိုင်ပိုင်ခွင့်အနေဖြင့်ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ 7-Eleven သည် ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် Mobil ၏ကျန်ရှိနေသေးသောAustralianစတြေးလျဓာတ်ဆီဆိုင်များကိုဝယ်ယူခဲ့ပြီး၎င်းတို့ကို 7-Eleven ဆိုင်များသို့ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ဩစတြေးလျတောင်ပိုင်းတွင် Mobil ဓာတ်ဆီဆိုင်အားလုံးကို Peregrine ကော်ပိုရေးရှင်းသို့ရောင်းချပြီး On the Run ဓာတ်ဆီဆိုင်များအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။
ဩစတြေးလျရှိ ၇-ဆယ့်တစ်ဆိုင်များသည်နေ့စဉ်သတင်းစာများ၊ အချိုရည်များ၊ လက်ဆောင်ကတ်ပြားများကိုကြိုတင်ပေးချေထားသော Visa အမျိုးအစား ၃ မျိုးအပါအဝင်ဖြစ်သည်။ ဆိုင်ခွဲသည် BankWest နှင့်ပူးပေါင်းပြီးတစ်နိုင်ငံလုံးရှိသူတို့၏ဆိုင်တိုင်းတွင် BankWest ATM ကိုနေရာချပေးခဲ့သည်။ ဖောက်သည်များအားအခမဲ့ Slurpee ကိုပေးခြင်းအားဖြင့် ၇ နှစ် Eleven Day ကိုနိုဝင်ဘာ ၇ ရက်တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်ဧပြီလတွင် 7-Eleven သည်အနောက်ဩစတြေးလျတွင်စတိုးဆိုင်များစတင်ဖွင့်လှစ်ရန်အစီအစဉ်များကိုကြေညာခဲ့သည်။ ပထမနှစ်အတွင်းစတိုးဆိုင် ၁၁ ခုဖွင့်လှစ်ရန်စီစဉ်ထားပြီးစုစုပေါင်းစတိုးဆိုင် ၇၅ ခုမှာငါးနှစ်အတွင်းတည်ထောင်ခဲ့သည်။ ပထမဆုံးစတိုးဆိုင်ကို ၂၀၁၄၊ အောက်တိုဘာ ၃၀ ရက်တွင် Fremantle မြို့၌ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်ဇန်န ဝါရီလအထိတိုင်းပြည်တွင်စတိုးဆိုင်ပေါင်း ၆၇၅ ခုရှိသည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လတွင် Fairfax Media နှင့် ABC ၏လေးထောင့်အစီအစဉ်သည်ဩစတြေးလျရှိ ၇-ဆယ့်တစ်ရှိလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများ၏အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကိုတင်ပြခဲ့သည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအရဝန်ထမ်း ၇ ယောက်မှအများစုသည်အခွန်မပေးမီတစ်နာရီလျှင် ၁၀ ဒေါ်လာမှ ၁၄ ဒေါ်လာခန့်နှုန်းဖြင့်သာနှုန်းထားဖြင့်သာပေးရသောနှုန်းထားများဖြစ်ပြီးတစ်နာရီလျှင်ဒေါ်လာ ၂၄.၆၉ နှုန်းဖြင့်တရားဝင်လိုအပ်သောနှုန်းထားများအောက်တွင်ရှိသည်။
ဝန်ထမ်းများကိုမပေးရသောလုပ်ငန်းရှင်များသည်ပုံမှန်အားဖြင့်စာရင်းများကိုထိန်းသိမ်းထားပြီးဝန်ထမ်းအားတရားဝင်လိုအပ်သောနှုန်းထားဖြင့်ပေးဆောင်နေသည်ကိုပြသနိုင်သည့်မှတ်တမ်းများကိုပေးလေ့ရှိသည်။ ၀ န်ထမ်းများကိုထိုမှတ်တမ်းများကို အခြေခံ၍ လုပ်ခပေးမည်ဖြစ်ပြီး၎င်းတို့အားတရားဝင်လိုအပ်သောနှုန်းထက် ၀ က်ကိုထိထိရောက်ရောက်ပေးလိမ့်မည်။
ထို့အပြင်အလုပ်သမားများသည်အချိန်ပိုနာရီများ၊ ညများ၊ စနေ၊ တနင်္ဂနွေနေ့များနှင့်အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များအတွက်တရားဝင်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည့်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများနှင့်ပြစ်ဒဏ်များကိုမကြာခဏမခံရကြကြောင်းကိုလည်းအစီရင်ခံခဲ့သည်။
ဤအစီရင်ခံစာများပေါ်ထွက်လာပြီးကျယ်ပြန့်သောအာရုံစိုက်မှုကိုခံရပြီးနောက်အချို့သောဝန်ထမ်းများက၎င်းတို့သည် ၇-ဆယ့်တစ် လုပ်ခလစာစနစ်မှတဆင့်မှန်ကန်စွာငွေပေးချေမှုစတင်ခဲ့ကြောင်း Fairfax Media သို့စွပ်စွဲခဲ့ကြသော်လည်းသူတို့၏လုပ်ခ၏တစ်ဝက်ကိုငွေပြန်ပေးရန်ဖရန်ချိုက်စ်ကတောင်းဆိုလိမ့်မည် ။ 7-Eleven သည်နောက်ပိုင်းတွင်သူတို့သည်လစာလိမ်လည်မှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်အတွက်ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့လိမ့်မည်ဟုကြေညာခဲ့သည်။ ဩစတြေးလျနိုင်ငံ၏ပြိုင်ဆိုင်မှုနှင့်စားသုံးသူကော်မရှင်ဥက္ကchairman္ဌ Allan Fels ၏ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ Deloitte ၏အကြံပေးမှုဖြင့်လွတ်လပ်သောအဖွဲ့တစ်ခုကစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည်။ Deloitte ၏ ၀ န်ဆောင်မှုဖြင့်လက်ရှိနှင့်ယခင်ဝန်ထမ်း ၇ ဦး မှ ၁၁ ဦး ကိုလစာနိမ့်သည်ဟုဆိုကြသည်။ တစ်ဦးချင်းစီပြောဆိုချက်ကိုအကဲဖြတ်ရန်။
၂၀၁၅ စက်တင်ဘာလတွင်ဥက္ကဋ္ဌ Russ Withers နှင့်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Warren Wilmon သည်ကုမ္ပဏီမှနုတ်ထွက်မည်ဟုကြေညာခဲ့သည်။ Withers နေရာတွင်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌမိုက်ကယ်စမစ်နှင့် Bob Baily ကိုယာယီအမှုဆောင်အရာရှိချုပ်အဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့သည်။
7-Eleven ကိုလေးထောင့်ကွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် Walkley Award ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလတွင် Four Corners အစီအစဉ်တွင်ထင်ရှားကျော်ကြားခဲ့သောဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ Levitt Robinson solicitors မှ 7-Eleven နှင့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်သွေးဆောင်ခံခဲ့ရသော franchisees များ၏ကိုယ်စား ၇-ဆယ့်တစ်ရုံးချုပ်ကိုအတင်းအကျပ်အရေးယူနိုင်ရန်အလားအလာရှိကြောင်းကြေညာခဲ့သည်။ မှားယွင်းသောကိုယ်စားပြုသည်။
↑ 7-Eleven Opens 71,100th Store In S. Korea။ 11 July 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂.၀ ၂.၁ ၂.၂ "History - 7-Eleven Corporate"၊ 7-Eleven, Inc.။ April 18, 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on March 17, 2017။
↑ 7-Eleven Corporate။ 7-Eleven Corporate။ February 10, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Smith၊ Andrew F. (May 2007)။ The Oxford Companion to American Food and Drink။ Oxford University Press။ p. 146။
↑ Press၊ Hoover's Business (2010)။ Hoover's Handbook of Private Companies။ Hoover's Business Press။ p. 209။
↑ "Open Around the Clock - 7-Eleven Corporate"၊ 7-Eleven, Inc.။ April 18, 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on April 18, 2017။
↑ G. Allen Penniman။ geni.com။ October 12, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Edgar Erwin Penniman။ Pensacola News Journal (May 2, 2015)။ October 12, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "7-Eleven Owner in $5 Billion to Sell Company"၊ New York Times၊ July 6, 1987။ August 4, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Frank၊ Peter H.။ "Southland Buyout Hits Snag"၊ November 11, 1987။ August 3, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Wayne၊ Leslie။ "Takeovers Revert to the Old Mode"၊ January 4, 1988။ August 3, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Company News: Southland to Sell Chief Auto Unit"၊ New York Times၊ December 25, 1987။ August 4, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Company News: Circle K Will Acquire 473 7-Eleven Stores"၊ New York Times၊ March 1, 1988။ August 4, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "7-Eleven Parent Files 'Prepackaged' Bankruptcy : Retailing: Southland Corp. hopes to expedite the sale of the convenience store chain to its longtime affiliate in Japan"၊ Los Angeles Times၊ October 25, 1990။ August 4, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on9October 2015။
↑ "Japanese Firms Pull Southland Corp. From Chapter 11 : Bankruptcy: The two companies pumped $430 million into the parent company of the 7-Eleven chain for 70% of its stock"၊ Los Angeles Times၊ March 6, 1991။ August 4, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on4September 2015။
↑ "Southland is changing its name to 7-Eleven"၊ Los Angeles Times၊ March 10, 1999။ August 4, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "At 7-Eleven, the Big Gulps EludeaBan by the City", by Aaron Edwards, The New York Times, June 6, 2012 [consulted November 17, 2015].
↑ "The Tall, Cold Tale of the Big Gulp Thanks to 7-Eleven, large will never be the same", by Robert Klara, Adweek, February 16, 2015 [consulted November 17, 2015].
↑ We Have Texas to Thank for the Biggest Big Gulp (May 30, 2013)။
↑ Bloomberg on 'Big Gulp' law: Not banning anything, just portion control။ CBS News (March 10, 2013)။
↑ Abad-Santos၊ Alexander။ "7-Eleven Downsizes 'Double Gulp' To Just 156% of Your Stomach's Capacity" (in en-US)၊ The Atlantic။
↑ 7-Eleven Tests Cashierless Store At North Texas Headquarters (February 5, 2020)။
↑ "7-Eleven owners say wage rise has made them losers"၊ South China Morning Post၊ April 30, 2012၊ စာ- 1။
↑ "Let other cards share in Octopus' success"၊ South China Morning Post၊ April 4, 2002၊ စာ- 14။
↑ Rent Payment Methods။ Hong Kong Housing Authority။ December 11, 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Expansion round the clock"၊ South China Morning Post၊ May 27, 1987၊ စာ- 31။
↑ "24-hour shop opens soon"၊ South China Morning Post၊ April 1, 1981၊ စာ- 1။
↑ "Now it's 24-hour shopping"၊ South China Morning Post၊ April 4, 1981၊ စာ- 12။
↑ "Plan for 450 more 7-Elevens"၊ South China Morning Post၊ October 7, 1983၊ စာ- 29။
↑ "Food chain opens 200th HK store"၊ South China Morning Post၊ May 8, 1987၊ စာ- 5။
↑ "Octopus may spread tentacles to 7-Elevens"၊ South China Morning Post၊ June 22, 1999၊ စာ- 1။
↑ "Octopus, photos in 7-Eleven services"၊ South China Morning Post၊ July 8, 1999၊ စာ- 3။
↑ "SCMP shares rally; on asset disposal"၊ South China Morning Post၊ September 17, 2004၊ စာ- 3။
↑ "Dairy Farm expands despite soaring rents"၊ South China Morning Post၊ March 1, 2005၊ စာ- 4။
↑ "7-Eleven cafe fires first shot in fish ball war"၊ South China Morning Post၊ September 7, 2009၊ စာ- 1။
↑ "7-Eleven, Inc. Partners with PT. Modern Putra Indonesia in Master Franchise for 7‑Eleven Stores in Indonesia"၊ 7-Eleven, Inc.၊ April 6, 2009။ July 11, 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on September 9, 2010။
↑ "Charoen Pokphand Akusisi Bisnis 7-Eleven di Indonesia"၊ CNN Indonesia။
↑ "Akuisisi Batal, Gerai 7-Eleven Resmi Ditutup pada 30 Juni"၊ Okezone.com၊ June 23, 2017။ June 23, 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 7–11 around the world (company corporate information)၊ JP: SEJ၊ June 30, 2018 .
↑ Number of Stores in each administrative division (company corporate information)၊ JP: SEJ၊ July 31, 2018 .
↑ Seven-Eleven Opening At7A.M. On 7-11-2019 (in en-US) (2019-07-11)။
↑ You can withdraw Japanese yen from ATMs at 7-Eleven stores။ 21 September 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Solar Convenience Stores"၊ Tokyo Weekender၊ May 9, 2012၊ September 26, 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး .
↑ Users of 7-Eleven's mobile payment service lose total of ¥55 million after 900 accounts hacked
↑ "Company Overview of 7-Eleven Malaysia Sdn Bhd"။ Bloomberg Businessweek။ January 25, 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 7-Eleven buka cawangan ke 2,000 (July 20, 2016)။ 28 July 2020 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ October 29, 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Tan၊ Christopher (October 2, 2017)။ Shell to end partnership with 7-Eleven chain။ The Straits Times။ October 5, 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Hsu၊ Eva Dou and Jenny W.။ "How Convenient: In Taiwan, the 24/7 Store Does It All" (in en-US)၊ Wall Street Journal၊ 2014-05-17။
↑ 台湾のゆるキャラ「ＯＰＥＮちゃん」も和装で登場！ 「日本台湾祭り２０１７」 news.searchina.net (in ja)။
↑ ၅၂.၀ ၅၂.၁ ၅၂.၂ "Here's why Twitter users boycott 7-eleven"၊ Prachatai English၊ 12 March 2020။ 24 April 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "7-Eleven poised to top 11,000 stores in 2018"၊ Bangkok Post၊ January 31, 2018။ June 4, 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "FamilyMart to double stores in Thailand, take on 7-Eleven"၊ Nikkei Asian Review၊ November 15, 2016။ June 4, 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ About 7-Eleven, 7-Eleven. Retrieved 25 March 2010.
↑ "7-Eleven stores to reduce the use of plastic bags"၊ The Thaiger၊ 8 November 2018။ 8 November 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Major Thai stores to stop giving out plastic bags by 2020: minister"၊ 24 September 2019။ 25 September 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၅၈.၀ ၅၈.၁ Sahoo, Sananda (June 17, 2014)။ 7-Eleven to open in Dubai next year, first in Middle East။ The National။ 22 June 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ June 19, 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Armental, Maria။ "7-Eleven to Open Store in Dubai"၊ The Wall Street Journal၊ June 16, 2014။ June 19, 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၆၀.၀ ၆၀.၁ "Seven & I to open 7-Eleven in Dubai next year, first in Middle East"၊ June 17, 2014။ June 19, 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 16 October 2015။
↑ Milliyet, August 24, 1993
↑ Retro rebrand for 7-Eleven။ Inside Retail (January 28, 2013)။ 12 April 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ January 28, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Franchise Europe Top 500: 7-Eleven – FranchiseDirect.co.uk။ April 13, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Shell and 7-Eleven strike store deal (August 27, 2007)။ January 5, 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ US/UK: 7-Eleven plays down UK re-entry talk (March 25, 2014)။ 19 September 2020 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 24 July 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 7-Eleven considers UK convenience market entry။ TheGrocer.co.uk။
↑ 7-Eleven – International Licensing။ Corp.7-eleven.com (January 1, 2010)။ August 6, 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ August 8, 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Convenient Facts - 7-Eleven Corporate။
↑ 7-Eleven – A Strong Brand။ Franchise.7-eleven.com။ November 14, 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ August 8, 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 7-Eleven Buys 183 ExxonMobil Locations in Florida။ Convenience Store Decisions။ Harbor Communications (December 9, 2010)။ June 7, 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 7-Eleven® Signs Agreement with ExxonMobil To Acquire 51 North Texas Locations Retailer Continues Accelerated Store Growth။ 7-Eleven News Room။ 7-Eleven, Inc (August 16, 2011)။ November 10, 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ November 10, 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 7-Eleven Acquires Mobil Retail Fuels Business။ 19 March 2020 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ October 29, 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Slurpee News: HAPPY 7-ELEVEN DAY!။ January 30, 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ First 7-Eleven in WA to open in October။ 7-Eleven Stores Pty. Ltd (September 10, 2014)။ 19 March 2020 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ January 16, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 7-Eleven opens first WA store။ Franchise Business (October 31, 2014)။ January 16, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၇၆.၀ ၇၆.၁ ၇၆.၂ ၇၆.၃ "7-Eleven: Investigation exposes shocking exploitation of convenience store workers"၊ Sydney Morning Herald၊ August 29, 2015။ October 2, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 7-Eleven – A sweatshop on every corner (August 28, 2015)။
↑ Fels to Chair 7-Eleven Independent Panel။ 7-Eleven Australia။ 19 March 2020 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ October 2, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Roddan၊ Michael (September 30, 2015)။ 7-Eleven chairman Russ Withers quits, chief executive resigns။ The Australian။ News Corp Australia။ October 2, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Age journalists recognised at Walkley awards (December 3, 2015)။
↑ 7-Eleven Class Action Looms for Disaffected Franchisees (in en-US) (December 7, 2015)။5April 2019 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 24 July 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Wikimedia Commons တွင် ၇-ဆယ့်တစ် နှင့် ပတ်သက်သော မီဒီယာ ရှိသည်။
ဝီကီကိုးကားချက်တွင် ၇-ဆယ့်တစ် နှင့်ပတ်သက်သော အဆိုအမိန့်များ ရှိသည်။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=၇-ဆယ့်တစ်&oldid=730301" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၇ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂၊ ၂၂:၅၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။